१ भाद्र २०७६ आइतबार Sunday, August 18, 2019
पत्रकारितामा भीडतन्त्र हाबी : मन्त्री बाँस्कोटा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाली पत्रकारितामा भीडतन्त्र हाबी भएको बताएका छन् । उनले भीडलाई उत्तेजित पार्ने र अराजतकतामा खेल्ने प्रवृत्ति मौलाएको आरोप पनि लगाए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनीमा परिणात्मक बन्देज लगाउने निर्णय गलत भएको स्वीकार्दै आफूलाई व्यापारीले झुक्याएको बताएका थिए । सरकार झुक्किँदा उसकै स्वामित्वको कम्पनीले अनाहकमा नोक्सानी बेहोरेको छ । सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट चिनी ल्याउने गरेको छ ।
सत्य निरूपणमा पौने ५ करोड बेरुजु, डेढ लाखको थर्मस ५५ हजारको तौलिया
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पहिलो कार्यकालको चार वर्षमा ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित खर्च गरेको पाइएको छ ।
छुट्टाछुट्टै बलात्कारका घटनामा संलग्न ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–१ याम्खाकामा एक १७ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले स्थानीय २० वर्षीय उपेन्द्र राईले पक्राउ गरेको हो ।
संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने- 'मेरो पद अर्को संसदीय निर्वाचन पछि मात्रै जान्छ'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बिहान प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको पछिल्लो काम कारबाहीको बारेमा संसदलाई जानकारी गराएका छन् ।
गुम्बालाई छैनन् 'माइला’
सात वर्षयता मुस्ताङको ठिनीमा रहेको कुछब तेरङा गुम्बामा नयाँ लामा थपिएका छैनन् । बढीमा दुई सन्तान मात्र जन्माउने सोच बढेसँगै मुस्ताङका गुम्बामा लामाको अभाव देखिएको हो ।
मृत्यु जितेका जयबहादुर
टाउकामा कपाल छैन, जुँगा सेताम्मे छन् । उज्यालो अनुहारका उनलाई अग्लो कदको भएकाले पढदा थोरै कुप्रिनुपर्छ । चस्मा नलगाई ‘बीपीको विद्रोह’ पुस्तक पढिरहेका छन् । घरको पालीले ओझेल परे पनि उनलाई मसिना अक्षर पढ्न कुनै बाधा पुगेको छैन ।
एसइईको ग्रेडवृद्धि परीक्षा सुरु
माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को पूरक (ग्रेड बृद्धि) परीक्षा आजबाट सुरु भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले आज बिहान ८ बजेबाट देशभरका ३०४ परीक्षा केन्द्रबाट एकैसाथ परीक्षा सुरु गरेको छ ।
साताअघि ओखलढुंगाको सदरमुकामदेखि ३८ किमि दक्षिणी श्रीचौर गाउँकी एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरी जवान पक्राउ परे । जंगलमा घाँस काट्न गएकी किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा श्रीचौर प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रकाशकुमार यादव पक्राउ परे ।
चेलीबेटीले पाहुर (कोसेली) मा ल्याइदिएको मदिरा आठबीसकोट नगरपालिका–११ का रामबहादुर पुनलाई महँगो परेको छ । आफ्नो होटलमा आएका पाहुनासँग बसेर त्यही पाहुर सेवन गरेको थाहा भएपछि नगरपालिकाले उनलाई ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्दै [LIVE]
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा सम्बोधन सुरु गरेका छन् । आइतबार बिहान ११ बजे सुरु भएकाे प्रतिनिधिसभा बैठकलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेका हुन ।
आफ्नो खर्च आफैंलाई पत्तो छैन
गत वर्ष महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ७ सय ५३ स्थानीय सरकार र ७ प्रदेश सरकारका लागि ९४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट पठायो । तर त्यो रकम केकसरी र कहाँ खर्च भयो ? सदुपयोग या दुरुपयोग के भयो ? यसबारे मन्त्रालयलाई जानकारी छैन ।
हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा जेठ पहिलो सातादेखि नै किसानहरू खेतीमा निस्कन्छन् । बाँजो जोत्ने, धानवाली लगाउने कोदो रोप्नेजस्ता बर्खे खेतीमा व्यस्त हुन्छन । साउन १५ देखि भने ७० प्रतिशत बढी किसान फुर्सद हुन थाल्छन् ।
जग्गा धितो राख्दा ठगिए ४१ परिवार
आफन्त र छिमेकलाई विश्वास गरेर आफ्नो नामको जमिन निश्चित समयका लागि धितो पास गरेर ऋण लिने प्रवृत्ति बढेसँगै ठगिनेहरू पनि बढेका छन् । यस्तै समस्या मोरङको बेलबारीका ४१ परिवारले भोगिरहेका छन् ।
लोप हुँदै तमोरका माछा
कुनै बेला तेह्रथुम र पाँचथरको सीमा माझीटार, नक्कलेघाट, पिनासी, लुमुघाट, सिम्राघाट लगायत तमोर नदीमा बग्र्रेल्ती माछा पाइन्थे । स्वादिला माछा खान लागि पूर्वी तराईदेखि पारखीहरू भेला हुन्थे ।
प्रहरी–जनप्रतिनिधि मिलेर चुरे दोहन
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको चुरे क्षेत्रमा प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा उत्खनन भइरहेको खुलासा भएको छ ।
सामुदायिक वनलाई ९० प्रतिशत कर
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सामुदायिक वनमाथि कर लगाउन लागिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न तहमा एकै किसिमको कर लगाउन लागेकाले त्यसलाई हटाउन महासंघले माग गरेको छ ।
तीन पुस्तादेखि मुआब्जा पाउन नसकेको सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका कोसीपीडित शनिबारबाट सुनसरीस्थित कोसी ब्यारेजको नियन्त्रण कक्षनजिक रिले अनसन सुरु गरेका छन् ।
सरकारले असारदेखि भदौसम्म ३ महिना नदीजन्य पदार्थको दोहनमा रोक लगाए पनि महोत्तरीमा भने त्यसको वेवास्ता गरिएको छ । गिट्टी–बालुवा तस्करहरूले सरकारी नियम मिचेरै खोलाजन्य पदार्थ झिक्ने गरेका छन् ।
पत्नीको हत्या गरी फरार कालिकामाई गाउँपालिका ५ सिमराका ३५ वर्षीय मुक्तिनारायण राउत कुर्मीलाई प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाको टोलीले उनलाई सोही वडाको बौद्धीमाई मन्दिर नजिकको उखु बारीबाट पक्राउ गरेको हो ।
सर्लाहीमा फेरि हात्ती आतंक
भन्डै दुई महिनापछि जंगली हात्तीले पुनः बस्तीमा पसेर आतंक मचाउन थालेको छ । गत मंसिरको पहिलो साता जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रबाट आतंक मचाउन सुरु गरेको जंगली हात्ती झन्डै छ महिनासम्म आतंक मचाएको थियो ।
दुर्घटनामा पत्रकार डायलसन अधिकारीको मृत्यु
सप्तरीमा शनिबार बिहान एक बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । रुपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाबाट लगानी सम्मेलनमा सहभागी लिएर विराटनगर जाँदै गरेको बा १६ प २२३५ नम्बरको बोलेरो अनियन्त्रित्र भइ पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको कंचनरुप नगरपालिका-११मा दुर्घटना हुँदा रुपन्देहीका पत्रकार डालयस अधिकारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको सप्तरीका एसपी मनोज यादवले जानकारी दिए ।
रेलवे ट्र्याकमा बाढीपीडित
रेलमार्गमा गाडीहरू गुँडिरहन्छन् । धुलो उडेर पस्किएको खानामै पर्छ । हावा चलेपछि त्रिपाल समाएर बस्नु पर्छ । पानी परेपछि बस्ने ओभानो ठाउँ हुँदैन । ‘दुखियाका दुःख कति छन् कति । कसले देख्छ दुःख ?’
मार्मिङ सिन्धुर्जेको डाँडामा चौंरीगाई चराइरहेका ७० वर्षीय सोनाम लामा खुबै चिन्तित भेटिए । छेउको खाम्बोभरि लटरम्म छुर्पी, तल्लो भागमा ठूलो डेक्सी र ठेकीभरि दूधमोही देखाउँदै उनले चौंरी पाल्ने पाकाकै काँधमा भएको गुनासो पोखे ।
साझा अधिकारका सूचीका कानुनहरू निर्माण नगरेर प्रदेशलाई अधिकारविहीन अवस्थामा राखिरहेको संघीय सरकारले विकास निर्माणको काममा पनि आवश्यक सहयोग गरेको छैन ।
जिल्ला मालपोत कार्यालयकै मिलोमतोमा ६३ लाख ठगी गरेको पाइएको छ । लालपुर्जामा जग्गाको क्षेत्रफल बढाई प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट ठगी गरेको हो ।
माथि भीर, तल तामाकोसीको तीव्र बहाव । जुनसुकै बेला पनि बग्न या पुरिन सक्ने मन्थली घाटमा १८ परिवारको बसोबास छ । उच्च जोखिममा रहेको यो ठाउँका बासिन्दा त्रासमा बस्न बाध्य छन् ।
नौबिसे धार्केदेखि काठमाडौं कालीमाटीसम्म चल्ने बा २ ख १९८० नम्बरको बस जाँच गर्ने क्रममा पेस्तोलसहित एक युवकलाई पक्राउ गरिएको छ ।
माछा मार्ने क्रममा खोलाले बगाउँदा एक युवक बेपत्ता भएका छन् । उनलाई कालिञ्चोक खोलाले शुक्रबार अपरान्ह बगाएको हो ।
धम्पुसमा पर्यटन गुरुयोजना
कास्कीको धम्पुसमा वडास्तरीय पर्यटन गुरुयोजना बनेको छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–७ ले अन्तरिक्ष विज्ञान तथा जियोमेटिक्स अध्ययन केन्द्रसँगको सहकार्यमा गुरुयोजना तयार पारेको हो ।
श्रमदान गरेर बिजुली
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली छैन बडिगाड गाउँपालिकामा । त्यसैले चाहेको जस्तो उद्योग खोल्न सम्भव भएन । बिहानबेलुकी बिजुली बाल्दा भएको सबै ऊर्जा खपत हुन्छ । त्यसैले स्थानीयले आफ्नै लगानीमा सञ्चालित लघुविद्युत्को क्षमता बढाउन थालेका छन् ।
‘उपप्रमुखहरू छाया मात्र होइनन्’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पालिकाका उपप्रमुखहरू छाया मात्र नभएकाले काममा भेदभाव गर्न नहुने बताएका छन् ।
विपद् योजना तयार
तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले १० वर्षे विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना तयार पारेको छ । विपद् तथा जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् तथा जलवायु उत्थानशील गाउँपालिकाका रूपमा स्थापित गर्न योजना बनाएको हो ।
गण्डकीका ३० योजना अलपत्र
गण्डकी प्रदेश सरकारले कास्कीको रुपा रिङरोड बनाउने योजना अघि सार्‍यो । गत आर्थिक वर्षमा योजनाका लागि केही बजेट विनियोजन गर्‍यो । यसैगरी उक्त आवमा मोटरेबल पुल र सडक गरी ३० योजनाका लागि साढे २ अर्ब छुट्यायो ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ खयरमा चट्याङ लागेर भेडा मर्दा १० लाख बराबरको क्षति पुगेको छ । शुक्रबार राति ११ः३० बजे परेको चट्याङ लागेर खर्कमा बास बसेका ६१ वटा भेडा मरेका छन् ।
पाल्पामा बाघ जात्रा
पाल्पाको तानसेनमा आइतबार बाघ जात्रा देखाइएको छ । सो अवसरमा तानसेनको बजारमा बाघका आकृतिसहितका किशोर तथा युवाले बाजा बजाएर बजार परिक्रमा गरेका थिए ।
यहाँका किसानको मुख्य बाली मकै भित्र्याउने सिजन सुरु भएको छ । बाँदर, दुम्सी, बँदेल, हरिण, मृगबाट अन्नबाली जोगाउनै मुस्किल परेको किसानको गुनासो छ । गाउँघरमा जंगली जनावरले आतंक मच्चाएको उनीहरूले बताए ।
रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका–४, वयरघाटकी पुनिता साहनीको १४ वर्षमा बिहे भयो । १६ वर्षमै गर्भवती भइन् । सहज रूपमा बच्चा जन्माउन नसकेपछि गाउँको मझगावा स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला अस्पताल हुँदै बुटवलको सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालमा जटिल शल्यक्रियाबाट शिशु जन्मियो ।
ठेकेदारले भौतिक संरचना बनाउन ढिलाइ गर्दा कमल दहको पर्यटन विकास प्रभावित बनेको छ । सिस्ने गाउँपालिका–५ स्थित कमल दहको आकर्षण बढाउने भन्दै यससँग जोडेर भौतिक निर्माणको काम चलिरहेको छ ।
वन कर्मचारीको मिलेमतोमा समिलबाट काठ तस्करी भएको खुलासा भएको छ । गुलरियाबाट नेपालगन्जतर्फ गइरहेको ना२ख ८८९४ नम्बरको ट्रकसहित चिरान काठ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि वन कर्मचारीको मिलेमतो भएको खुलेको हो ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लमही नगरपालिका–९ रिहारमा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
आइतबार डडेलधुराको भात्काँडाबाट सल्लाको काठ मिलाइदिन लिएको घूसको ३ लाख २६ हजार रकमसहित गत साता बीपीनगर वन सबडिभिजनका प्रमुख सुरेशचन्द्र डीसीलाई अख्तियार टोलीले पक्राउ गर्‍यो । आफू प्रमुख रहेको सबडिभिजनअन्तर्गत ५६ हजार क्युफिट काठ काट्न कटानी उनले आदेश लिएका थिए ।
साँफे–मार्तडी सडकखण्डअन्तर्गत बाजुराको अम्कोट क्षेत्रमा सडक भासिएपछि एक सातादेखि यातायात आवागमन अवरुद्ध छ । बुढिगंगा नदीबाट सुरु भएको पहिरोमा करिब ५ सय मिटर माथि पुगेपछि सडक भासिएको हो ।
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा ओल्के पर्वको चहलपहल सुरु भएको छ । साउनको अन्तिम र भदौको पहिलो दिन विशेष महत्त्वसाथ यो पर्व मनाइने परम्परा छ ।
स्वामीकार्तिक गाउँपालिका–२ को छुद्दरी टोल जिल्लाकै सबैभन्दा जोखिममा रहेको ठहर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले गरेको छ । उक्त बस्तीमा बाढी पस्दा २७ गाई र १२ गोरु बगाएर मरेका थिए ।
चिकित्सक नहुँदा उपचार प्रभावित
मोहन बुढाऐर, संगीता तिमिल्सेना
कर्मचारी समायोजनले सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ । कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थयकर्मी र कर्मचारी समायोजन रोजेर आफ्नो क्षेत्रमा गइसकेका छन् । समायोजन भई दरबन्दीमा हाजिर हुन नआएकाले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको हो ।
भारतको गुजरातमा ११ वर्षदेखि बस्दै आएका देवलका लक्ष्मीदत्त जैसीको परिवार गौरा मान्न घर फर्किएको छ । सम्भव भएसम्म उनको परिवारका सबै सदस्य हरेक वर्ष गौरा मान्न जन्मथलो फर्कने गर्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको ४० वर्ष लामो इतिहासमा नेपाली भलिबलले अहिलेसम्म उल्लेख्य सफलताको स्वाद चाख्न पाएको छैन ।
बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगामा उपाधि रक्षा अभियान बिर्सनलायक हिसाबमा थालेको छ । खेलको अन्तिम समयमा वैकल्पिक खेलाडी अर्टिज अडुरिजले गरेको सनसनीपूर्ण भलीमा एथलेटिक बिलबाओले बार्सिलोनालाई १–० ले पराजित गर्‍यो । त्यसबाहेक बार्सिलोनाले चोटका कारण लुइस स्वारेजलाई पनि गुमाउन पुग्यो ।
कार्ल्सबर्ग गल्फ सिरिज २०१९ को दोस्रो सिरिजमा नेटतर्फ भरत बस्ताकोटी ३८ अंक बटुल्दै विजेता भएका छन् भने गर्सतर्फ टासी छिरिङ (डोङ) ३६ ग्रस अंक हासिल गर्दै ग्रस च्याम्पियन भएका छन् ।
पाथीभरा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा इलामको रेडहर्स क्लब शनिबार सेमिफाइनलमा पुगेको छ । रेडहर्सले फिदिम स्पोर्टिङ क्लब पाँचथरलाई टाइब्रेकरमा ३–२ ले पराजित गरेको हो ।
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको तीन वर्षयता कप्तानी गर्दै आएका विराज महर्जन नेपाली टिममा स्थान बनाउन असफल भएका छन् । मलेसियन सुपर लिग च्याम्पियन जोहर दारुल ता‘जिम एफसीविरुद्ध हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि शुक्रबार घोषित २३ सदस्यीय नेपाली टिममा पर्न परेनन् ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आव ०७४/७५ मा ४ हजार ९ सय १५ व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन गरेको थियो । गत आव ०७५/७६ मा २ हजार ८ सय व्यावसायिक फार्ममा अनुगमनको लक्ष्य राख्यो । तर उक्त लक्ष्य भेट्टाउनै सकेन ।
नुवाकोटमा अर्गानिक पदमार्ग
धिमे र भुस्याको ताल पछ्याउँदै रोपारहरू सडकमा निस्के । उनीहरूको हातमा धानको हरियो बीउ लहलह देखिन्छ । अघिअघि बाउसेहरू कोदाली बोकेर आली सम्याएझैं नाटक गर्न थाले । त्यसपछि रोपारहरू सडकमै धान रोप्न थाले ।
रंगमञ्च र फिल्म क्षेत्रमा जीवनभर सक्रिय अभिनेत्री शुभद्रा अधिकारीको ७२ वर्षको उमेरमा शनिबार बिहान राजधानीको डल्लुस्थित निवासमा निधन भएको छ । केही वर्षदेखि श्वासप्रश्वासको समस्याबाट पीडित अधिकारीका एक छोरा र एक छोरी छन् ।
किराती मिथकमा आधारित गीत ‘नाना तायामा, भाइ हेछाकुप्पा’ को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । भूपाल राईको शब्द र दिनेश सुब्बाको संगीत रहेको उक्त गीत शुक्रबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिएको हो । गीतमा रुपकुमार राई र राधा राईले आवाज दिएका छन् ।
नाकमा फुली, टाउकोमा सेतो कपडा बाँधेकी ७० वर्षीया उज्जवलीदेवी शाही लाठीको सहारामा मेला हेर्न विनायकको उकालो लागिन् । लयाँटी निवासी यिनी पूर्वी अछामको विनायकमा हरेक वर्ष आइपुग्छिन् । मालिका चतुर्दशीको अघिल्लो दिनदेखि ३ दिनसम्म यहाँ यो क्षेत्रकै ठूलो मानिने ‘मष्टामाण्डौं’ मेला लाग्ने गर्छ ।
अंग्रेजी क्यालेन्डरमा नयाँ साल फेरिन अझै साढे चार महिना बाँकी नै छ । तर सन् २०१९ हलिउड सांगीतिक फिल्मका कारण विशेष बनिसकेको छ । गायक, संगीतकार वा सांगीतिक समूहमाथि यस वर्ष उल्लेख्य मात्रामा फिल्महरू बने र अझै बनिरहेका छन् ।
ललितपुरमा निकै पुराना परम्परागत बाजा बजाउने छुट्टाछुट्टै समूहहरू छन् । पाटनीमा तीमध्ये एउटा समूहलाई ‘नौ बाजा खलः’ भनिन्छ । यो बाजा बजाउन आवश्यक सम्पूर्ण बन्दोबस्त मतयाः पाः गुठीले गर्छ ।
आकाशेपानी संकलन प्रणाली जडान
विहार पुनर्निर्माण गर्न एक करोड
थुनुवा घर कमजोर
काबुलमा विवहा समारोहमा बम बस्फोट, ६३ को मृत्यु, १८० भन्दा बढी घाइते
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा एउटा विवहा समारोहमा भएको आत्मघाती बम बिस्फोटमा परी हालसम्म ६३ जनाको मृत्यु भएको छ भने १८० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव योजना बनेको छ । ब्रिटेनको मुख्य विपक्षी दल लेबरका नेता जेरेमी कोर्बिनले बिना कुनै सम्झौता ब्रिटेन युरोपियन यूनियन (ईयू) बाट बाहिरिने स्थिति ‘नो डिल ब्रेक्जिट’ लाई रोक्न आफूलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनाउन आव्हान गरेका छन् ।
भारत प्रशासित कश्मीरमा १२ दिनदेखि बन्द फोन सेवा आंशिक रूपमा सुचारु गरिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार जम्मुका पाँच जिल्लामा २ जी सेवासहितको इन्टरनेट सेवासमेत चल्न थालेको छ ।
कश्मीरमा विकसित घटनाक्रम त्यसबारेको त्रिदेशीय चासोबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा औपचारिक छलफल भएको छ । चीनका आग्रहमा शुक्रबार राति राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा बन्द कोठाभित्र बैठक भएको हो ।
जिब्राल्टरले गत महिना नियन्त्रणमा लिएको एक इरानी तेल ट्यांकर छाड्न अनुमित दिइएको भोलिपल्टै अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयले पुनः जफत गर्न पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
२ वर्षअघि दीक्षितले भनेका थिए - 'यो लामो आयुको मसँग कुनै रहस्य छैन'
झन्डै एक शताब्दी लामो उमेर छुनै लागेको एउटा बयोवृद्धको दैनिकी कस्तो होला? अइया–आत्थु गर्दै ओछयानमा ढल्किरहने, सास बढ्ने, खानपिनमा नाकनिक गर्ने अथवा यस्तै–यस्तै। प्रेसर, सुगर, ग्यास्टिक अथवा ऐजन–ऐजन रोगब्याधको सूची पनि लामै हुन सक्छ।तर यो बुढयौलीमा मामलामा केही अपवाद पनि छन्, आँखै सामुन्ने। काठमाडौं उपत्यकामा खाइलाग्दो चालमा बढी बाँचेका पात्रहरूको नाम लिनुपर्‍यो भने कवि माधवप्रसाद घिमिरे (९६) अथवा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी (९५) को नाम जोडतोडले लिने गरिन्छ।
प्रदर्शनकारी र प्रहरी झडपका तस्बिरहरु
लोकसेवा विज्ञापनविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरु र प्रहरीबीच झडप भएको छ । ‘आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन’ को नाममा भृकुटीमण्डपबाट शनिबार दिउँसो निकालिएको जुलुस पुतलीसडक पुगेपछि प्रहरीसँग झडप भएको हो ।
तिलिचो उच्च स्थानमा रहेको एउटा ठूलो ताल हो । यो समुद्र सतहबाट ४ हजार ९ सय १९ मिटर उचाइमा छ । तालको पानी र त्यसमाथि उडिरहेको बादलको गतिले यहाँ वेगले हावा चलिरहन्छ । बेलुकीपख र राति यहाँ बस्न कठिन भए पनि दृश्य भने अद्भुत ! हेर्न र फोटो खिच्न कम्ता रमाइलो थिएन । सिनेमाको जस्तो छिन–छिनमा दृश्य परिवर्तन भइरहन्छ । फोटोग्राफी गर्न सजिलो होस् भनेर सूर्योदय, सूर्यास्त, चन्द्रोदय र चन्द्रास्त हुने समय उपयुक्त हुन्छ । तालमाथिको तिलिचो पिकबाट ‘सनसेट’ हुने भएकाले त्यसप्रति धेरैलाई चासो हुँदैन । भोलिपल्टको सूर्योदय नै प्रतीक्षाको विषय बन्छ । गोरख बिष्टले खिचेका तिलिचोका आकर्षक तस्बिरहरु ।
एक महिनाअघि लढेका सीमास्तम्भ अझै उठन सकेका छैनन् । कपिलवस्तुको सुदुर पश्चिमको सीमा छुट्याउँदै बगेको दुई खोलामा ५ सीमा स्तम्भ लडेका छन् । एउटाको टुप्पो भच्चिएकोछ । असार २८ गते खोलामा आएको बाढीले सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त बनेका थिए । महिना बढी भइसक्दा पनि सीमा स्तम्भ मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन ।
जनैपूर्णिमा मेलामा गोसाइँकुण्ड जाने बाटो छैउमा पाल तथा प्लास्टिकले निर्माण गरिएका टहरैटहरा देखिन्छ । यसलाई थर्पु भनिन्छ । मेला भर्न आउने भक्तजनको सुविधाका लागि वर्सेनि थर्पु बनाइन्छ । गोसाइँकुण्ड पदमार्गमा जम्मा १४ वटा स्थायी होटल छन् । होटलको संख्या थोरै भएकाले भक्तजनको चापलाई थेग्न थर्पु निर्माण गरिएको हो । भक्तजनको सुविधाका लागि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले बर्सेनी मेला अवधिभर थर्पु निर्माण गर्न अनुमति दिने गरेको छ ।
उपत्यकामा मनाइने गाईजात्रा मध्ये भक्तपुरको जात्रा पृथक, मनोरञ्जनात्मक एवं व्यङ्ग्यात्मक हुने र ‘घिन्तात्वाङ, गिनित्वाङ घ्यान्ताङ घिसिङ त्वाङ, ताहामचा गना ते ग्वाङखङ् प्वाले ते, ग्वाङ प्वाले मन्ह्यसा खुसिङ चुइक छोय’, भनेर नाचिने आकर्षक घिन्ताङ घिसी नाचको बढी चर्चा हुने गरेको छ ।
टुई दशकअघिसम्म वर्षात्का दिनहरूमा गाउँको दृश्य बेग्लै हुन्थ्यो  । आज दूर पहाडका गाउँहरूले जुन नियति बेहोरिबसेका छन्, ती बेग्लै थिए हिजो  । चलायमान, व्यस्त र गुल्जार । ...
सबभन्दा ठूला ब्रान्ड
आइफोनले चिनियाँ बजारमा पछिल्लो समय आफ्नो हिस्सा गुमायो  । उसको बजारलाई अमेरिका–चीन व्यापारको राजनीतिसँगै हुवावे र साओमीका स्मार्टफोनले असर गर्‍यो  ।
एउटा घनघोर जंगल थियो  । त्यस जंगलमा बाघ, भालु, गैंडा, सिंह, वन बिरालो, लोखर्के प्रशस्त थिए  ।